Noraran'i Maraoka ny sidina UK, Alemana ary Netherlands rehetra noho ny fiakaran'ny COVID-19 vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba an'i Maraoka » Noraran'i Maraoka ny sidina UK, Alemana ary Netherlands rehetra noho ny fiakaran'ny COVID-19 vaovao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao farany momba an'i Maraoka • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK
Noraran'i Maraoka ny sidina rehetra any UK noho ny fiakaran'ny COVID-19 vaovao any Angletera.
Tao anatin'ny tapa-bolana lasa izay, nitatitra tranga COVID-19 vaovao kokoa ny Fanjakana Mitambatra, mihoatra ny France, Alemana, Italia ary Espana.
Noraran'i Maraoka ny sidina mankany UK avy any UK noho ny toe-javatra mihasimba COVID-19 any Great Britain
Nesorin'ny mpitatitra anglisy EasyJet ny dia lavitra avy any UK mankany Morocco hatramin'ny 30 Novambra.
Ny mpandraharaha fialantsasatra britanika lehibe TUI dia miara-miasa amin'ny mpanjifa handamina ny fialany any Maroc.
Nanambara ny governemanta maraokana fa naato avokoa ny sidina rehetra mankany UK sy Netherlands ary Alemana amin'ny alin'ny misasak'alina.
Nilaza ny tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta Rabat fa ny lalàna momba ny sidina UK dia natsangana noho ny fitomboan'ny isan'ireo tranga vaovao momba ny aretina COVID-19 any Great Britain.
Ny hetsika, izay hanan-kery manomboka amin'ny 23: 59GMT amin'ny Alarobia, dia nohamafisin'ny birao nasionalin'ny seranam-piaramanidina marokana, izay nampitandrina fa hijanona eo amin'ny toerany izany 'mandra-pahatongan'ny fampandrenesana manaraka.
Ny fanapahan-kevitry ny governemanta mandràra ny dia dia mety hisy fiatraikany amin'ny fianakaviana any Angletera sy Wales mikasa ny handeha any amin'ny toerana fizahan-tany malaza ho an'ny anglisy mandritra ny fialantsasatra antsasak'adiny, izay manomboka amin'ny herinandro ambony.
Mpitondra anglisy EasyJet, izay mampandeha sidina manelanelana an'i Eropa sy Maraoka, dia nanafoana ny dia lavitra avy any UK mankany Morocco hatramin'ny 30 Novambra.
EasyJet dia mifampiresaka amin'ny governemanta maraokana momba ny fanolorana sidina fampodiana an-tanindrazana ho an'ny olom-pirenena UK izay mahita fa mihitsoka any ivelany noho ny fameperana.
Ny mpandraharaha fialantsasatra lehibe TUI dia nanamafy fa efa niresaka tamin'ny governemanta maraokana momba ity hetsika ity izy, ary nilaza fa miara-miasa amin'ny mpanjifa ny orinasa handaminana ny fialany amin'ny firenena Afrika Avaratra.
Ny fanapahan-kevitra ny hamerana ny dia eo anelanelan'ny UK sy Maraoka tonga rehefa nanoratra tranga maherin'ny 40,000 vaovao COVID-19 isan'andro ny manampahefana britanika, ary nitatitra ny fahafatesan'ny coronavirus hatramin'ny iray volana ny firenena hatramin'ny martsa lasa teo.
Tao anatin'ny tapa-bolana lasa izay, nitatitra tranga COVID-19 vaovao ny UK raha oharina amin'ny fitambaran'i Frantsa, Alemana, Italia ary Espana.
Ny lohan'ny vondrona elo britanika NHS Confederation, Matthew Taylor, dia nampitandrina fa i UK dia "tafintohina amin'ny krizy amin'ny ririnina," mamela ny serivisy ho an'ny fahasalamana "ho maika."
Saingy, nolavin'ny governemanta UK ny antso hampihatra ny famerana COVID-19 eo ambanin'ny COVID 'Plan B', izay namoaka ny soso-kevitra momba ny fanidiana mandritra ny ririnina.